TRUESTORY: ငြိမ်းချမ်းရေး ဖျက် မျဉ်း (သို့) ဘောကျော်ဟဲ
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖျက် မျဉ်း (သို့) ဘောကျော်ဟဲ
ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်မြို့နယ် ၀ဲကြီးကျေးရွာတွင် ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ရက်က ဧရာဝတီ နှင့် ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဘောကျော်ဟဲ သီးသန့်တွေ့ဆုံစဉ်(ဓာတ်ပုံ – စောရန်နိုင်/ဧရာဝတီ)
နှင့် ငြင်းမရသည့် အချက်တစ်ချက်မှာ တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်းအေးချမ်း တိုးတက်ဖို့အတွက် ပြည်တွင်းငြိမ်း
ချမ်းရေးသည် အဓိက ကျသော အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည်။လွတ်လပ်ရေး ရပြီးသည့်နောက်ပိုင်း
ရာစုနှစ် တစ်ဝက်နီးပါး မှာ တိုင်းပြည်ဟာ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို ရင်ဝယ်ပိုက်ခဲ့ရတယ်။၂၀၁၀ အရပ်ဘက်အစိုးရတက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအ တွက် အားတက်သရော လုပ်ဆောင်လာတာတွေ တွေ့ရသလို ၊ လိုအပ်တဲ့ တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းမှုတွေ လည်း ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ သံသယ ဖြစ်ဖွယ်မရှိပါဘူး။
ထို့အတူပဲ KUN လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုရအောင် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့် ဒီလို ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူဖို့အတွက်လည်း KUNလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းထဲမှာ အတွန်းအတိုက် များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကေအန်ယူ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်မူတူးစေးဖိုးအုပ်စုနဲ့ ဖဒိုဒေးဗစ်တာကဘောအုပ်စု ဆိုပြီး ဂိုဏ်းနှစ်ခုကွဲနေတာကြာပါပြီ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်က ဖဒိုဒေးဗစ်တာကဘော က ကေအန်ယူရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပြီး ကေအန်ယူကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီမှာ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ (၂) တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်၊ သူ ကေအန်ယူ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မူတူးနဲ့ အပေါင်းအပါများကို ဗဟိုကော်မီတီရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ မြန်မာတပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး လို့ဆိုပြီး အဖွဲ့က ထုတ်ပယ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်၊ နောက်တော့ အောက်ခြေတပ်များရဲ့ တောင်းဆိုမှုအရ ဗိုလ်ချုပ်မူတူးနဲ့ အဖွဲ့ကို ပြန်လည်လက်ခံခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမည့် နောက်ဆုံးကျင်းပတဲ့ ကေအန်ယူညီလာခံမှာ ဗိုလ်ချုပ်မူတူးအုပ်စုက အသာစီးရပြီး ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို ဗိုလ်ချုပ်မူတူးစေးဖိုးက ရရှိသွားပြီး ဖဒိုဒေးဗစ်တာကဘော ကတော့ ဗဟိုကော်မီတီဝင် အဆင့်အထိ ထိုးကျသွားပါတယ်၊ တစ်ဘက်မှာတော့ သူက ဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ (၂) တာဝန်ကို ဆက်ယူထားဆဲပါ၊ဒါပေမယ့် ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့ ဖဒိုဒေဗစ်တာကဘော ဟာ ဗိုလ်ချုပ် မူးတူးစေးဖိုးအပေါ်မှာ လုံးဝ ကျေနပ်မှု မရှိပါဘူး။
ဒီအတွက် သူဟာ တပ်မဟာ (၅) မှူးဖြစ်တဲ့ ဘောကျော်ဟဲကို အသုံးပြုလာတယ်။ တပ်မဟာ (၅) မှူးဖြစ်တဲ့ ဘောကျော်ဟဲဟာ “လူတစ်ချို့ဟာ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ တပ်မတော် အပေါ်ယုံကြည် မှုလွန်ကဲနေတယ်” လို့ မကြာခဏ မဆိုသလိုပြောဆိုနေတာတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်မူတူးစေးဖိုး ကို ရည်ညွှန်းပြောဆို နေတာပဲ ဖြစ်တယ်။ထို့အတူတပ်မဟာ (၅) မှူး ဘောကျော်ဟဲ ဟာ အစိုးရ နဲ့ လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး မယူကြဖို့ လိုက်လံတိုက်တွန်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့တာလဲရှိတယ်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်မှာ ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဗုံးတရားခံဖြစ်တဲ့ စောနေတိုးဟာ လည်းဘောကျော်ဟဲ ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှု အောက်ကပဲ လှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံး ဘောကျော်ဟဲ ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ဘယ်လောက်ထိ အတင့်ရဲလာလဲဆိုရင် မူတူးစေးဖိုး ကို လုပ်ကြံဖို့ အထိတောင် ဖြစ်လာတာ ဟာ အဆိုးရွားဆုံး သော ယုံကြည်မှု လွန်ကဲ ချက်ကြောင့် ဖြစ်တယ်.။အစိုးရနဲ့ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မူတူးစေးဖိုးကို အပြတ်ရှင်းချင်နေပါတယ်။ဒါကို အထူးသတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ဒါမှ မဟုတ်ပဲ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့နေလိုက်ရင် ဘောကျော်ဟဲ ရဲ့ လုပ်ကွက်တွေ ဇာတ်ရှိန်မြင့်လာပြီး အစိုးရနဲ့KNU အကြားက ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် စိုးရိမ် ရနံ့တွေ သင်းနေသလို ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖျက်သမား လုပ်ရပ်တွေကိုလည်း အချိန်မှီတားဆီးဖို့ လိုပါတယ်။
Posted by TRUE STORY at 11:59 AM
မဟာအံ့ထူးကံသာ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကြီးပရဝုဏ်ဧရိယာ အ...
တပ်မတော်နေ့မှာ တပ်မတော်က ဘာလက်နက်တွေ ပြသသွား လဲ ??
အောင်သူရ | Thursday, 27 March 2014 မကွေးဆရာတော် အ...
စစ်သားဆိုတာ ပြည်သူထဲက ပြည်သူပဲဟုဆိုသူ ဆရာမြ သန်းစံ...
“ပေးဆပ်မှုကုသိုလ်အပြည့်နဲ့ မြင့်မြတ်နိမ့်ကျတဲ့ ဘ၀ အ...
ယနေ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံရုံးရှေ့တွင် Dahaka Tribune သတင...
ညောင်နန်းသာ ရွာသားများကို ပါးရိုက် နှိပ်စက်နေသည့် ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ “ငတုံးတွေ” ဟု ပြောကြားချက်ကို...
လေးစားခံ့ညားလောက်သည့် စွမ်းရည်ဖြင့် နိုင်ငံတော် ကာ...
နိုင်ငံတော်အလံက NLD အလံထက် နိမ့်ကျနေလို့လား ???
မြန်မာလူမျိုးတွေ စေတနာကောင်းတယ်.. ဒါပေမယ့် ဘာလို့ ...
ရှကီရာ ပုံစံနဲ့ မာရီနာ
အရေးပေါ်အခြေအနေ ရုပ်သိမ်းရန် ထိုင်းအစိုးရ သဘောတူ
နယ်ခြားစောင့်တပ်ရော ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ရော လက်တွေ့ကျတဲ...
မဟာဓမ္မာစရိယ ဆရာတော် အညတြ ဘိက္ခု မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
အပြောင်းအလဲအတွက် ကိုယ်က စပြီး ပြောင်းလဲပါ
ပင်လယ်ပြင်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သတ...
မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ၊ ဧမာနွေလဘုရားကျောင်း နံဘေးနှင့် ဆူ...
Mister & Miss University 2014 ပြိုင်ပွဲဝင် ကျောင်း...
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် နို...
"ပျောက်ဆုံးနေသော လေယာဉ်ကြီးကို လကမ္ဘာပေါ်တွင်တွေ့ရှိ...
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စာနယ်ဇင်းကျောင်း တည်ထောင်မည်
အမေရိကန်ကို “ပြာမှုန့်” ဖြစ်အောင် ရုရှလုပ်နိုင်ဟု ရ...
ပျောက်ဆုံး မလေးရှား လေယာဉ်ပေါ်ပါ လေယာဉ် အင်ဂျင်နီယာ...
ဒီချုပ်ပါတီ အစည်းအဝေးမှ မမေ့နိုင်သောနေ့တစ်နေ့
ရှာဖွေရေး ဧရိယာ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ ပါဝင်လာ
မလေးရှားလေယာဉ် ပျောက်ဆုံးမှု အကြမ်းဘက်အဖွဲ့ တခုက သ...
မင်္ဂလာ သတင်း နှင့် တပ်မတော် ဘယ်လဲ ဘာလဲ
စစ်တပ်မရှိက ပဋိပက္ခပြန်ဖြစ်နိုင်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်ရော...
မလေးရှား၏ မပွင့်လင်းမှုများကြောင့် ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာ...
“KIA ဘယ်လို ယုတ်မာလိုက်လဲဆိုတာ နှင်းမေသာ မေးကြည့်ပါ”
လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ တပ်မတော်ကို ယုံကြည်လာကြောင...
ပိုမို ဆန်းကြယ်လာနေတဲ့ မလေးရှား လေယာဉ်ပျောက်ဆုံးမှု
ကမ္ဘာ့အထူးဆန်းဆုံး လေယာဉ်ပျောက်ဆုံးမှု ၁၀ မှုအကြောင်း...
ပြည်သူကို ဆူပူအောင် မြှောက်ကြပြန်ပြီ
အသက်နှစ်ဆယ်ပြည့်တော့မယ့် ဝါဆိုမိုးဦး ကတော့ မင်္ဂံလာေ...
ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံသော နံနက်ခင်းလေး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကြောင်းပြု တရုတ်၊ ကုလားတွေပါ...
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီကို အပြတ်အသတ် အနိုင်...
ဟုတ်သော်မှန်သော် အတိကျမပြောနိုင်သော ဖေ့စ်ဘုတ်မှပြည...
ငြိမ်းချမ်းရေး လက်ခုပ်သံကြားက နှလုံးလှ စစ်သားကြီး
အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ဖက်စပ် လုပ်ငန်းများ အကဲဖြတ်ရေး...
NLD ခေါင်းဆောင်တွေက ဒါကို အံ့အားသင့်သွားကြတယ်
Facebook စာမျက်နှာသစ် စီစဉ်
ပြည်တွင်း သတင်းထောက်များသို့ 
တစ်ခါက ကျွန်တော့်တို့ ဆရာမ
အနော်ရထာ ပူးပေါင်း စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွင်းက လေကာတပ်...
သူ....သူ သူတောင်းစား မဟုတ်ပါ
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက တာဝန်ယ...
စစ်ခွေးလို့ ခေါ်တာ လေးစားလို့ပါ
အမျိုးသမီးအဆိုတော်များ လူရွှင်တော်လုပ်လာကြတဲ့ မြန်မ...
ကုလငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ မြန်မာစစ်တပ် မ...
ကြည်း၊ လေ၊ တင့်၊ အမြောက် ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေး (အနော်...
NLD ရုံးချုပ်အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် အလှူငွေစတင်ကော...
မြန်မာကာချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ ပထမဆုံး မီဒီယာန...
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ရေကစားမဏ္ဍပ်ကြီး ၅ဝနီးပါး ဆောက်လုပ...
ဦးရွှေမန်း ဘယ်ခြေကို လှမ်းသလဲ......
ကျွန်တော်ချစ်သော သမ္မတကြီး (သို့ ) ကတ္တီပါ လိပ်ပြာ
ဂုဏ်ပြုထိုက်ပေ - တပ်မတော် (ရေ)
ယူကရိန်းတပ်တွေကို လက်နက်ချဖို့ ရုရှား ရာဇသံပေး
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့နေသည့် ငါးကြီးဓာတ်ပုံအကြောင်း...
တူရကီနိုင်ငံမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဂျူးစံသာ ရေ...
အဆင့်မြင့် ကျောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်သစ်ကြောင့် ဒေသခံမျာ...
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောင်ဆောင်၍ လုယက်မှုကျူးလွန်သူများအား ...
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းသူကိုယ်စား ၀န်ချတောင်း...
ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးအား မလေးရှား...
တစ်ကမ္ဘာလုံး အင်တာနက် အခမဲ့သုံးနိုင်တော့မည်
လိင်တူချစ်သူ အမျိုးသား နှစ်ဦး၏ မင်္ဂလာသက် (၁၀) နှစ်...
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သူရဦးအောင်ကို မယောင်ရာ ဆီလူး...